JID-CUSUB, Falaqeynta GASO, GANUUN iyo GASIIN W/Q:- Dr, Cabdirashiid M. Ismaaciil | Laashin iyo Hal-abuur
Gaso, Ganuun iyo Gasiin, markaan buugan qacanta ku dhigay, erey kasteba waan dul istaagay. Dhowr daqiiqadood ayaan maanka ku ruxay, si wax uga soo baxaan. Haseyeeshee, waxba way ka soo dhiiqi wayday. Galka buugga qaybtiisa dambe ayaan u rogay, ishaan la raacay falaqaynta kooban ee buuga : « Buug-suugaaneedkan xambaarsan sheekada la magac-baxday Gaso, Ganuun iyo Gasiin oo uu ku fara yaraystay Cali Jimcale Axmad, waxaa lagu tilmaami karaa waa cusub oo u beryey fanka sheeka-qorista Soomaaalida. » Waxaa na faalayntaa ka jeedinayaa Hal-abuuraka caanka ah ee saxiibkay Maxamed Dahiir Afrax. Nin khibrad weyn u leh hab-qoraalka iyo suugaanta soomaaliyeed ba.
Haseyeeshee, Gaso, Ganuun iyo Gasiin, weli waxba iigama cadcadda, wax aanan ahayn malayn iyo mala’awaal. Qoraaalkii gaabna ayaan si watay : « Waa sheeko hodan ku ah aqoon ballaaran iyo erayo dhumuc weyn. Waa sheeko jiika cusub indhaha u furaysa, hal-abuurka Af-Soomaaliga wax ku qorona waddo cusub u jeexaysa. Waddo jid-bixyeenimo oo ka duwan tii la isla yiqiin. »
Ugu dambayn, qoraa Faransi ah oo falaqaynta suugaanta Afrika ku xeel dheer ayaa yidhi : « Soo noolaasha suugaanta Afrikada Madow waxay taariikhdeedu barbar socotaa taariikhda soo noolaasha Siyaasadeeda. Xeeladaha waawayn ee labadaa tariikh waa isku mid, mar Alli iyo mar walba oo damiirka siyaasadeed uu kaco, mar walba oo talaabo loo qaado dhinaca madaxbanaanida, waxa soo ifbaxa hal-abuur muujinayaa jid-cusub… “ waxay ila tahay, sida uu Maxamed Dahir Afrax, soo sheegay, in Gaso, Ganuun, Gasiin ay taas tahay amba ay ka mid-tahay.